Sekolim-pirenena ho an’ny Mpandraharahan’ny fonja (ENAP)
Fanapariahana lalàna eny anivon’ny Kaominina
Fitsidihan’ny Masoivoho Indiana
Fanatsarana ny asam-pitsarana
Famerenana ny hasin’ny Fitsarana
Ady amin’ny Covid-19 any am-ponja
Réunion du comité ministériel tripartite sur les affaires juridiques (TSMCLA)
Visioconférence du TSMCLA
Fitsidihina ny ENAP Toamasina
Published Date: 3 octobre 2020
Dinika momba ny bokintany sy sarintany rovitra
Niatrika fivoriana androany tao amin’ny tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana ety Faravohitra ny Vaomiera ho an’ny fanavaozana ny lalànan’ny fandraharahana (CRDA). Nitarika izany ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) Rtoa Salohy Norotiana Randrianarisoa.
Nifantohan’ireo mpikambana sy mpandray anjara nandritra ny fivoriana ny fandinihana amin’ny antsipirihany ny Volavola rijan-tenin-dalàna mikasika ny famerenana amin’ny laoniny ny bokintany rovitra sy sarintany rovitra (avant projet de loi relative à la reconstitution des documents fonciers et topographiques inexploitables). Mbola hisy moa ny fihaonana manaraka ho tontonsaina eo anivon’ny CRDA momba ny lahadinika androany.
Published Date: 2 octobre 2020
« Efa vonona ny fanomanana ny fifaninanana ho fidirana manaraka » hoy ny Tale Razafintsalama
Mivoatra ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpandraharahan’ny fonja (ENAP). Raha 200 teo aloha no mpianatra afaka noraisina, ankehitriny dia afaka mandray mpianatra eo amin’ny 600 ka hatramin’ny 700 ny sekoly. Efa vonona avokoa ny fanomanana rehetra amin’ny fifaninana ho fidirana ho an’ny andiany manaraka. Raha ny vina sy faniriana dia tokony ho tontonsa mialoha ny faran’ny volana novambra 2020 ny fifaninana. Fanamby voalohany ny ady amin’ny kolikoly amin’ny fifaninanana.
Nandrita izay 4 taona nitarihany ny sekoly izay, dia tsy nikely soroka izy nitondra hatrany fanavaozana. Misongadina ireo ato anatin’ity tafatafa niarahana tamin’ny Talen’ny ENAP, ny Inspecteur d’Administration Pénitentiaire en Chef 2ème échelon Razafintsalama Désiré.
Manatontosa fitsidihana fonja maromaro ianao, inona no antony?
“Ny ENAP no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiofanana mitohy sy fiofanana fototra ho an’ny fandraharana ny fonja, noho izany dia fanao ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny tsirairay toy ny fampianarana eo amin’ny fitandroana ny filaminana any am-ponja, ny fibaikoana sy ny fitantanana, ny etika sy ny deontolojia. Hatreto dia ny fonjan’Antirabe, Ambatolampy ary ny tao amin’ny Fitaleavam-paritry ny fandraharahana ny fonja (DRAP) Vakinankaratra no nampanaovina ny fiofanana”.
Momba izay indrindra, manao ahoana ny politikam-pampianarana ao amin’ny ENAP?
“Vokatry ny fiaraha-miasa sy fanohanan’ny tetikasa PAJMA dia miompana amin’ny fanavaozana ireo singam-piofanana ny fampianarana. Tanjona ny fanamafisana ny fiofanana matihanina. Fanavaozana ifotony miompana amin’ny fampanaraham-penitra ireo singa rehetra amin’ny fiofanana fototra mba hifanaraka amin’ny toetrandro. Noho izany dia hisy ny fandraisana mpampiofana raikitra miisa 5.
Kandida 23 hatreto no nandefa ny antotan-taratasiny. Hatao tsy ho ela ny fisafidianana ireo 5 ho voatazona. Efa tokony natao saingy nahemotra noho ity amehana ara-pahasalamana ity.Taloha mantsy dia tsy nanana mpampiofana raikitra mihitsy ny ENAP. Farany ary tsy kely indrindra ny fanomanana sy fikarakarakana ny fifaninanana hiditra ho mpianatra eto amin’ny ENAP”.
Lire la Suite « Sekolim-pirenena ho an’ny Mpandraharahan’ny fonja (ENAP) » →
Published Date: 29 septembre 2020
« Fitsarana manakaiky vahoaka sy mora atonina »
Ny Kaominina Ambanivohitra Ambohitrimanjaka no nisantatra ny fanapariahana sy fampahafantarana lalàna ho an’ny daholobe izay nokarakarain’ny Ministeran’ny Fitsarana tamin’ity taona 2020 ity.
Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Ministera ny amin’ny « Fitsarana manakaiky vahoaka sy mora atonina » mantsy izany fidinana ifotony izany. Ka ny marainan’ny Talata 29 septambra 2020 tao amin’ny tranompokonolona Ambohitrimanjaka no notanterahin’ny Sampan-draharaha misahana ny fanapariahana lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana miandraikitra ny fandinihana sy ny fanavaozana lalàna eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izany ary natrehan’ireo mponina eny an-toerana.
Tanjona ny hampahafantarana ny lalàna manankery sy ireo lalàna vaovao, ny hanapariahana izany amin’ny sehatra isan-tsokajiny, ny anaovana fampielezana eny ifotony ny andinin-dalàna sy ny paikady ara-pitsarana ary ny hampiroboroboana ny fiaraha-miasa ho fampahafantarana ny lalàna.
Novoaboasan’ireo mpitsara nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpanatrika ny mikasika ny lalàna mifehy ny fanambadiana, ny lalàna mifehy ny fiankohonana ary ny paikady heloka. Ny Mpiraki-draharaha ihany koa dia namelabelatra mikasika ny anjara asa sahanin’izy ireo eny anivon’ny fitsarana.
Ankoatra ireo dia novaliana ireo fanontaniana napetraky ny olona nanatrika izay mikasika ny ady tany, ny fandovana ary ny paikady ara-pitsarana.
Hitohy hatrany moa izao fidinana ifotony tanterahin’ny Foibem-pitondrana miandraikitra ny fandinihina sy ny fanavaozana ny lalàna izao ka ny Kaominina Ambanivohitra Tsiafahy indray no hisitraka izany amin’ity volana oktobra ity. Marihina fa fiaraha-miasa sy fanohanan’ny tetikasa PAJMA no anaovana izao hetsika izao
Published Date: 28 septembre 2020
An-dalam-panatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fitsarana Malagasy sy Indiana
Mahavelom-bolo ny fifandraisana misy eo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Repoblikan’i Inde. Hamafisina ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra maro, anisany ny lafiny Fitsarana. Nivoitra ireo androany atoandro tety Faravohitra, nandritra ny fitsidihana nataon’ny Masoivoho Indiana miasa sy monina eto amintsika, Atoa Abhay Kumar, tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.
Araka ny fanazavana dia efa an-dalam-panatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fitsarana Malagasy sy Indiana. Anaty fandinihana lalina ny roa tonta ankehitriny. Raha vao vita io dia hatao ampahibemaso sy amin’ny fomba ofisialy ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana ho fantatry ny besinimaro. Marihina fa mbola tsy nisy io fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny Fitsarana io hatreto.
« Mahafaly ny fifandraisana misy eo amin’ny firenena roa tonta hatramin’izao. Hatsaraina kokoa izany. Anton-diany androany ihany koa moa ny fangatahana am-panajana fiaraha-miasa ho an’ireo teratany Indiana izay voatazona eto noho ny valanaretina Covid. Miangavy ry zareo ny mba hahafahan’ireo voatazona ireo mifanerasera amin’ny fianakaviany hisian’ny fifanakalozana. Ilay fifanarahana eo amin’ny lafiny Fitsarana eo amin’ny firenena roa tonta moa dia hiompana amin’ny hoe, raha misy teratany Malagasy iharam-boina any Inde, na raha misy teratany Indiana iharam-boina eto Madagasikara dia mba hisy ny fahafahana mampihatra ny fifanarahana na any na eto » hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.
Ankilany dia nambaran’ny Masoivohon’ny Repoblikan’ny Inde, Atoa Atoa Abhay Kumar fa vonona tanteraka ry zareo hanampy ny fanjakana Malagasy, ka anisany ny Ministeran’ny Fitsarana. « Maro ny sehatra iriana hiaraha-miasa. Tanjona ny fanamafisana orina ny fihavanana sy ny fampandrosoana iarahana. Ohatra ny lafiny fampianarana, ny teknolojia vaovao, ny fahasalamana, ny fandriam-pahalemana, ny fizahan-tany. Ny anton-dia androany moa dia ny Fitsarana. Eo ihany koa ny fifampizarana traikefa eo amin’ny Fitsarana Malagasy sy ny Fitsarana Indiana. Lahadinika ny fomba hanatanterahana sy hahamasaka izany » araka ny fanazavany.
« Adidin’ny vahoaka ny manampy amin’ny ady amin’ny kolikoly » hoy ny Minisitry ny Fitsarana
Lohahevitra roa no nanontanian’ny mpanao gazety ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo tao aorian’ny fanokafana ny atrikasa atrehin’ny Mpiraki-draharaha etsy amin’ny ENMG Tsaralalàna nanomboka androany maraina.
Voalohany ny tomban’ezaka nandritra izay 8 volana naha-Minisitra azy izay.
« Tsy afaka ny hiteny aho inona ny dingana, fa hitanareo ny ezaka natao sy mbola tohizana. Niezaka izahay manao ny famerenana amin’ny laoniny ny fitondrana ny asa sy ny fanatanterahana azy, mba hitan’ny olona ihany kosa angamba ny vokatra azo sy ny dingana efa natomboka sy mbola atao amin’ny famerenana ny hasin’ny Fitsarana Malagasy sy ny fitokisann’ny vahoaka. Manao zavatra tsy mora, fa adidy nekena koa tsy maintsy atao sy tratrarina ny tanjona. Mafy ny zava-nitranga tanaty izay 8 volana izay. Ireny ohatra ny lositra tany am-ponja, ireny ny raharaha mafana sy goavana maro, miezaka izahay amin’ny fomba fitantanana madio ary manentana ireo mpiara-miasa rehetra tsy anavahana momba izany. Antso avo no atao amin’ny vahoaka. Izahay efa miezaka, manao, fa ny rehetra koa mila manana fitondran-tena mendrika, sy tsara, mba hiady amin’ny kolikoly satria matetika dia avy any amin’ny vahoaka izay manan-draharaha ihany no fiandohan’izany. Adidin’ny tsirairay no manampy amin’ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny Fitsarana manontolo mba ho famerenana ny hasin’ny asam-pitsarana sy ny fahatokisan’ny vahoaka » hoy ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.
Sazy ho an’ireo mania
Fanontaniana faharoa ny mikasika ireo ondry mania eo anivon’ny Fitsarana Malagasy.
« Misy tokoa ny ondry mania, mety tsy fantatry ny besinimaro fa nisy ary mbola hisy ohatra ireo Mpitsara miakatra Filan-kevitra momba ny sazy na CODIS. Nisy efa nandalo, ary mbola misy ny ho avy ny sazy, na ho an’ny Mpitsara, na Mpiraki-draharaha na Mpandraharahan’ny fonja. Misy ohatra ny Mpitsara atao famotorana ankehitriny, misy ny enjehina araky ny lalàna, toy izany koa ny Mpiraki-draharaha nania. Misy Mpandraharahan’ny fonja migadra any Ambatolampy. Ohatra ihany koa ny fanenjehana ny Tale Jeneralin’ny CNAPS teo aloha, izay Mpitsara, na dia tsy tao anatin’ny asa maha-mpitsara azy ary no anenjehana azy. Tiako ny manamarika fa, tsy amin’ny alalan’ny fanenjehana ireny nania ireny irery kosa no fomba azo andrefesana ny hoe miasa sy firosoan’ny asa, fa amin’ny alalan’ny ezaka ankapobeny atao hanomezana ainga vaovao ny tontolon’ny asam-pitsarana manontolo eto Madagasikara » hoy ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety.